Itafile | PIVX
Ngethuba leenyanga ezi-2 zokuzalwa kwePIVX (uJan / Feb, ngo-2017), uluntu lubona isangqa esikhulu sabantu esiza kwisiteshi sethu se-Slack (sisekho kuDiscord ngoku) Abambalwa bangena njengama-trolls akho kunye nee-FUDsters kwaye ngamanye amaxesha, unobungqineli obunqabileyo kwaye unobungangamsha. Oku kwadala indawo ekhohlakeleyo ngamanye amaxesha kwaye sasikhathazeke ngamalungu ethu kunye nedumela lale ndawo kunye neprojekthi yethu. Njengomphakathi, sathetha malunga nomtshini kwaye sifuna ukubonakala ngathi kwaye kufuneka sizenze njani kwivesi le-crypto.
Abaninzi baqala ukuthetha ngokuba “ngabafana abalungileyo” be-crypto, kuba yindawo apho abantu baziziva bekhuselekile kwaye bebugcisa kwaye apho singayi kubeka khona ukwenza okanye ukuziphatha kakubi okanye ukulimala.
Sasidinga ibali, ingxelo, umfanekiso ukubanceda abantu baqonde apho bangena khona kwi-PIVX ngaphandle kokubeka imigaqo okanye izikhokelo. Yilapho umfanekiso wetafile weza engqondweni. Ndifumene umfanekiso, wabhala ikopi kwaye siyithumele kuluntu. Yayibonisana noluntu kwaye ukususela ngoko siye sathetha le ngxelo ukukhuthaza abantu ukuba bahlanganyele ngendlela elungileyo, baqonde indawo yabo etafileni, bazise konke okusemandleni abo, kwaye babe ngabona bahle.
Ukususela ngoko, i-vibe yoluntu olusondeleyo kuluntu luye lwaqina kwaye siyaziwa ngokuba yindawo ekhuselekileyo kunye neendawo ezikhuselekileyo kuzo zonke izizukulwana, amadoda kunye namasiko.
Le filimu yayiyimisebenzi yothando (ixesha lokuzithandela) kunye nezimali ezizimeleyo.
Siyathemba ukuba ihlawulela nawe kunye noluntu, ukuze sikwazi ukuziqhayisa apho sihamba khona kwaye sihamba nani
Chad Ballantyne ophinde aziwe ngo: Rhubarbarian
Mamela ukurekhoda okuphilayo kubambalwa bethu baxoxa ngeBrith emva kwenyanga enye kunyaka odlulileyo. IThebhile ichazwe ngamaxesha ambalwa.
Le fayili ifanisa abantu basekuhlaleni njengoko kuboniswa ngumntu omnye kwenkcubeko. Zive ukhululekile ukufaka indawo endaweni, abantu, itafile kunye nokutya ngamava akho enkcubeko. Le ngcamango iyafana. Into epholileyo iyenzeka xa sihlangana kunye nokutya nabantu abanjengengqondo, kwaye sinye xa sihlangana ngeprojekthi njengePIVX. Joyina Discord. Thumela kwimifanekiso yakho yentlanga. Masibhiyozele ukuhluka kweenkcubeko !!
Nceda ubeke ingxelo malunga nendlela oye wafumana ngayo le PIVX malunga noluntu, ukunakekelwa, ukubambisana kunye nokuzisa okusemandleni akho kwitafile.